Wararka Maanta: Talaado, Sept 11, 2018-Kulan aan caadi ahayn oo golaha wasiirrada Puntland uga socda Garoowe
Kulankan waxaa kalo ka qaybgelaya madaxweyne ku-xigeenka Puntland,arrimaha diirrada lugu saarayo waxaa ka mid ah in golaha uu ka dooddo go’aankii hoggaamiyayaasha madasha wadatashiga dowlad-gobolleedyada ay xiriirka ugu jareen dowladda Federaalka, qodob kale oo la xiriira xaaladda gobolka Sool ayaa ka mid ah arrimaha kale ee kulanka looga hadlayo.
" Shirkan deg dega ah waxaa ay golaha uga hadlayaan arrimo xasaasi ah oo ay ugu horreeyso xaaladda siyaasadeed ee dalka." ayuu yiri sarkaal goobjoog u ah shirka oo la hadlay Hiiraan Online.
Warbaahinta ayaa dibad joog ka ah kulanka, balse warar horu-dhaca ah oo laga helayo halka uu ka socda shirka ayaa sheegaya in go'aamo kulanka laga soo saari doonno ay qeyb ka noqon karraan in Puntland ay hakiso xiriirka ay la leedahay hay'adaha dowladda federaalka,sida ay oggaatay Hiiraan Online.
Kulankan aan horey loo sii shaacin, wuxuu ku soo aaday xilli khilaaf xooggan uu u dhaxeeyo dowlad-gobolleedyada iyo dowladda federaalka, waxaana shir maalmo ka hor ku soo dhammaaday Kismaayo ay si wadajir ah dowlad-gobolleedyada xiriirka ugu jareen dowladda dhexe ee federaalka.